Nabadoon caan ah oo lagu dilay Afgooye - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Nabadoon caan ah oo lagu dilay Afgooye
Nabadoon caan ah oo lagu dilay Afgooye
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaarayo Gobolka Shabeellada Hoose, Kooxo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa xalay gudaha degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ay ku dileen Nabadoon Caan ka ahaa deegaanka, waxaana la helayaa faah faahino dheeraad ah.
Goobjoogaal ku sugnaa goobta dilka ka dahcay ayaa sheegay in rag dhalinyaro oo watay Bastoolad ay toogteen Nabadoonka, xili uu ku sugnaa meel ku dhow Gurigiisa, isagoona u dhintay xabbado looga dhuftay jirka sare. Marxuumka la dilay ayaa waxaa magacaabiisa lagu sheegay Axmed Maxamed Mayow, isla markaana waxaa goobta si deg deg ah uga baxsaday raggii ka dambeeyay falkaas oo aan heybtooda la aqoon.
Qaar mida Ehelada oo ka dhashay qofka la dilay ayaa tegay goobta uu falku ka dhacay, iyagoona qaaday Meydka, waxaana halkaas baaritaano kooban ka sameeyay Ciidanka amniga maamulka degmada Afgooye, in kastoo aan la ogeyn cida lagu soo qabtay. Waxa degaanja dilka ka dhacay ka socda howlgalo lagu baabi goobayo raggii ka dambeeyay falka lagu dilay Nabadoon Axmed Maxamed Mayow oo Caan ka ahaan gudaha degmada.